सलमानलाई नेपाल ल्याउने पैसा धुर्मुस-सुन्तलिलाई दिएको भए राम्रा २ वटा वस्ती बन्थे ! | Rajmarga
सलमानलाई नेपाल ल्याउने पैसा धुर्मुस-सुन्तलिलाई दिएको भए राम्रा २ वटा वस्ती बन्थे !
काठमाण्डौ- बलिउडका चर्चित नायक सलमान खान नेपाल आउँने समाचारले नेपालि मिडियामा निक्कै स्थान पाईरहेको छ ।
मार्च १० तारिख, टुंडिखेलमा हुने सलमान खानको ‘दबंग द टुर’ का लागि खानलाई आयोजक कम्पनी ओडीसी इन्टरटेन्मेन्ट प्रालिले नेपाल ल्याउन लागेको हो । उनि नेपाल आउँने भएपछी रंग मिडियामा धेरै गसिपहरु बाहिरीए । ति मध्यमा नेपालि राजपटमा चलेकी नायिकाहरुले सलमानको कोरष डान्स गर्न इन्कार गरेको कुराले माहोल निकै ततायो ।
सलमान वलिउडकै महँगा नायक हुन् । नेपालमा उनलाई महँगो पैसा तिरेर ल्याईदैछ वलिउडक किंग नेपालमा आउँनुले नेपालि फिल्म ईण्डाष्ट्रीमा त राम्रै महत्व राख्ला तर उनलाई १२ करोड तिरेर नेपाल ल्याईदै गरेको समाचार बाहिरिए सँग सामाजिक सन्जालहरुमा यसको निकै आलोचना भैरहेको छ ।
१२ करोडमा ल्याईदै छ सलमानलाई
१२ करोडमा सलमानलाई ल्याउनु भन्दा त १२ करोड धुर्मुस सुन्तलिलाई दिएको भए अरू दुई ओटा नमुना बस्ती बन्ने थिए । हजारौं बालबालिकाले पढने अबसर पाउँथे सयौं हातले ति दातालाई रातदिन आशिर्वाद दिँदै पुकार्थे । गरिबको जिबन फेरीने थियो तर यहाँ महंगो टिकटमा सलमान लाई हेर्नेको ठुलो जमात छ ।
करोडौँ तिरेर आउँन लागेका खानलाई भगवाण भित्रिन लागेको मान्ने एकथरी जमात छ भने यत्रो तडकभड्क र ठुलो धनराशि खर्च गरेर कार्यक्रम गर्ने हुन्नथ्यो भन्ने जमात पनि छ ! देशकै हालत कस्तो छ मान्छेहरु अभाव गरिबी रोगब्याजले दिनहुँ मरिरहेका छन् अझै हामीले उनलाई ल्याए वापत करोडौँ तिर्नुपर्ने ? यो कस्तो अचम्मको कुरा हो । मान्छेहरु खाना नपाई, न्यानो नपाई छटपटिएर मरिरहेका छन् ।
नेपालि नायिकाहरु द्वारा वहिष्कार:
छक्क परे सलमान
Previous post: मरे पनि केहि गुनासो छैन भन्ने चेलीको ईराकबाट यसरी उद्धार गर्न सफल भए – रबि एरपोर्ट सम्म लिन पुगे (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
Next post: यो हो क्यान्सर देखि कैयौ थरिका रोग ठीक पार्ने साग, जुन नेपालमा सजिलै पाइन्छ